यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! यहाँ थिचेर सेयर गरौँ भएकाले EBAY मा बेचौं ! - Media Online Khabar
यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! यहाँ थिचेर सेयर गरौँ भएकाले EBAY मा बेचौं !
काठमाडौ जेठ१७ जमाना यति छिटो परिवर्तन भयो कि मान्छे हरुले जे पनि अनलाइनमै काम गर्न लागे । अनलाइन बाट श्रीमती पाउँछन, अनलाइन बाटै नोकरी पाउछन भने पढाइ पनि अनलाइन मै हुन् थालेको धेरै भएको छैन ।इन्टरनेटको दुनियामा खरिद विक्रीको प्रख्यात वेब साइट हरु हुन् eBay, OLX र quikr ।
तपाई संग पनि नेपाली पुरानो नोट छ भने यसरि बिक्रि गर्न सक्नु हुन्छ । eBay को एउटा खाता खोल्नुहोस ।
आफुले कति सम्ममा कसैले किन्न आए दिने ? मुल्य खुलाउनु आवस्यक छ । eBay को वेबसाइटमा नक्कली नोट अपलोड गर्न पाइदैन त्यसैले गलत धन्दा गर्छु भने जे पायो त्यहि नगर्नु होला ।
Previous विदेशबाट फर्केकालाई स्वदेशमै रोजगारी सक्दो सेयर गर्नुहोस्
Next सुनको मूल्‍य एकैदिन ११ सयले बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
यस्तो छ पारस शाह चढ्ने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकल,मुल्य सुन्दा विश्वास नलाग्ला